Torohevitra hafahafa 5 hampitomboana avo roa heny ny vokatra » Martech Zone
Torohevitra hafahafa 5 hampitomboana avo roa heny ny vokatrao
Asabotsy, Aprily 28, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Dawud nanisy marika ahy tao amin'ny bilaoginy. Manana lahatsoratra tsara be izy etsy Ahoana ny fomba hijanonana ho mifantoka amin'ny famokarana lehibe kokoa. Ao anatin'izany no ilazany ny fomba nanokatohany 50 minitra isan'andro hifantohana sy hanatanterahana.
Tsy nifehy ny tenako aho mba hanokana fotoana isan'andro toy izao fa zavatra ezahako io. Ity no fomba ahitako vokatra foana… ary ny sasany aminy dia mety hafahafa saingy manampy ahy amin'ny fitantanana ilay andro fiasana toa tsy tantanana io. Mahaliana fa ny sasany amin'ireo toro-hevitra sy fomba fanaoko dia mihaona amin'i Dawud's!
Taloha, mino aho fa novakiako fa ny mpiasa amerikanina antonony dia tena mamokatra asa 5 ora isan'andro na dia miasa lehibe kokoa noho ny 8. Ity no fomba hampitomboana avo roa heny an'io 5 ora io ary hahazoana famokarana 10 ora mandritra ny 8 ora isan'andro.
Atsaharo ny famaliana ny telefaoninao:
Tsy mamaly ny findaiko na ny findaiko aho raha tsy hoe vonona aho. Ny namako sy ny mpiara-miasa amiko dia efa zatra izany ary misy ny manome fotoana sarotra ahy momba izany. Misy mihevitra fa tsy mahalala fomba. Tsia. Ny famadihana ny findainao na ny findainao ho voicemail dia mitovy amin'ny fanidiana ny varavaran'ny biraonao mba hahavitana ny asa. Tena mino an'izany aho ny famokarana dia mifototra amin'ny fahaverezana… Very hery ary tsy mamokatra firy ianao. Ho anao izay any ivelany any izay programa dia marina izany. Afaka mahazo programa maharitra herinandro aho ao anatin'ny iray andro raha tsy manelingelina ahy. Imbetsaka aho dia manao programa mandritra ny alina amin'ny tetikasa satria mamela ahy 'hiditra ao amin'ilay faritra' tanteraka izany. Tahiry eo ho eo: 1 ora isan'andro.
Aza mihaino Voicemail intsony:
Tsy mihaino mailaka am-peo aho. Fa maninona ?! Nilaza fotsiny ianao fa tsy mamaly telefaona ary izao tsy mihaino mailaka ?! Tsia. Nojereko ny mailaka nataoko ary raha vao henoko hoe iza izy, dia hamafana avy hatrany ilay hafatra aho ary miantso azy ireo hiverina. Hitako fa ny 99% amin'ny fotoana dia mila miantso ilay olona hiverina aho, koa maninona no mihaino ny voicemail iray manontolo? Misy olona mamela hafatra maharitra iray minitra! Raha mamela mailaka amiko ianao dia avelao ny anaranao sy ny nomeraonao ary ny fahamailanao. Hiantso anao aho raha vantany vao manana fotoana mety. Mahazo mamaky loha be momba an'io koa aho. Tahiry eo ho eo: 30 minitra isan'andro.
DWT - mitondra fiara raha miresaka:
Miantso olona aho rehefa mitondra fiara. Manana adiny iray isan'andro isan'andro amin'ny fotoana ifandraisana aho ary io no fotoana tsara indrindra tokony hiresahako amin'ny olona. Mbola tsy nanakaiky tratry ny lozam-pifamoivoizana mihitsy aho ka tsy te handre izany banga rehetra momba ny fiara izany raha miresaka fa olana. Afaka mifantoka tanteraka amin'ny roa tonta aho. Raha manjary mahatsiravina ny fifamoivoizana dia miala tsiny tsotra izao aho ary miantso ilay olona hiverina. Tahiry eo ho eo: 1 ora isan'andro.
Laviko ny fanasana fivoriana. Mety, hoy ianao, fa very saina izy izao! Hitako fa mandany fotoana ny ankamaroan'ny fivoriana. Ho hitanao fa sahirana aho hanaiky ny fanasana fivoriana izay tsy misy drafitra na drafitra fihetsika. Raha tsy misy tanjona ny fihaonana dia mety tsy hiseho aho. Manelingelina ny mpiara-miasa amiko sasany izany, saingy tsy manahy izany aho. Tena sarobidy amiko sy amin'ny orinasako ny fotoako. Raha tsy hainao ny manaja izany dia tsy olako izany - anao izany. Mianara mitantana ny fotoanan'ny olona amin'ny fomba mahomby! (Mamaly ny mailaka ao amin'ny PDA ihany koa aho mandritra ny fivoriana rehefa tsy ilaina ny saiko.) Tombom-bola azo antoka: 2 ora isan'andro
Manorata ary zarao ny drafitr'asa:
Ity dia mety tsy dia hafahafa loatra. Ilaina tokoa ny mijanona mamokatra, na izany aza. Soratako ny drafitr'asa izay misy iza, inona ary oviana ary, indrindra, zarao amin'ilay olona na ekipa iarahako miasa.
Iza - Iza no hahazo it amiko, na iza no ho azoko it ny?
Inona - Inona ilay fanaterana? Mahaiza manokana!
Rehefa - Rahoviana no hanaterana azy? Ny daty iray ary na dia fotoana iray aza dia hitondra anao hihaona amin'ny fandaharam-potoana.
Tahiry eo ho eo: 30 minitra isan'andro.
WFS: Miasa amin'ny Starbucks
Torohevitra fanampiny iray mety mety na mety aminao: Miasa ao amin'ny Starbucks aho. Amin'ny maraina izay tsy ananako fivoriana, iantsoan'ny mpanjifa, na iarahako miasa amin'ireo ekipako, dia matetika aho no mamonjy an'i Starbucks ary mandondona ilay asa eo am-pelatanako. Starbucks dia be olona sy mamorona tontolon'ny korontana voafehy izay tiako. Miasa mafy sy haingana ao amin'ny Starbucks aho. Ny seza tsy mahazo aina dia manampy koa. Raha tsy afaka mivoaka haingana any aho dia hanenenako amin'ny ratra ambany. Mitahiry vola: 4 ora isan-kerinandro.
Mety ho anao daholo aho amin'ny vidiny ambany sy ambany ankehitriny…
Apr 28, 2007 ao amin'ny 1: PM PM
Wow, nofantsihinao tamin'io zavatra fihaonana io izany. Izay iasako, raha mandà fivoriana ianao dia heverina ho tsy mahalala fomba, toy ny manozona!
Mandeha any amin'ny fivoriana ianao, 5 minitra ao anatiny, tonga ny tantaram-piainan'ny tena manokana ary lasa zavatra mifamatotra izy io. Mampahasosotra ahy ny helo velona! Ny fivoriana 10 minitra matetika dia maharitra adiny iray noho izany!
Tokony hanomboka hivory aho fa tsy misy tanjona na fandaharam-potoana voalaza, na izay tsy tena ilaiko izany. Mazava ho azy fa raha tsy avy amin'ny lehibeko ilay fangatahana 🙂
May 4, 2007 amin'ny 7: 39 AM
Tena tsy azoko io hevitra io, AL. 'Bosses' no maningana tsy hanapaka. 🙂
Apr 28, 2007 ao amin'ny 10: PM PM
Tokony hojerenao ny boky vaovao mivoaka antsoina hoe Herinandron'ny asa efatra ora nataon'i Timothy Ferriss. Mahalana izy no mivory, ary mandefa mailaka indray mandeha isan-kerinandro fotsiny - mitovy amin'ny zavatra resahinao. Vao haingana aho no nihaino ny lahateniny SXSW ary nahita fa tena mahaliana. Manantena ny hamaky ilay boky.
Apr 29, 2007 amin'ny 12: 31 AM
Hitako ny Bilaogy Tim Ferriss koa. Manantena ny hijerena ilay boky!
Apr 30, 2007 amin'ny 8: 13 AM
Eny. Raha te-hamokatra ianao dia mila mametraka antso an-tariby sy mailaka amin'ny toerany. Raha andevo ho azy ireo mandritra ny andro fotsiny ianao dia tsy manao na inona na inona izy ireo fa manelingelina ny fivezivezenao.
May 4, 2007 amin'ny 7: 38 AM
Misaotra Dawud! Ao amin'ny fiarahamonintsika 'American-Me-Me-Me' dia tsy mankasitraka izany ny olona sasany rehefa tsy mamaly mailaka na antso an-tarobia eo noho eo ianao. Nefa tapa-kevitra ny hampahafantatra ilay izy aho.
Apr 30, 2007 amin'ny 11: 34 AM
Ny famakiana ny mailaka dia afaka mitelina fotoana be dia be. Fantatro ny olona sasany izay tsy maintsy mamaky ny hafatra tsirairay raha vantany vao maheno ny “ding” izy ireo. Novonoiko ny mpampahalala ny mailako ary namaky ny mailaka tamin'ny fandaharam-PAHATSAKO aho. Fotoana sasany mandritra ny andro no tsara indrindra amiko mamaky mailaka, mamaly antso sns.
Tsy niresaka momba ny fitorahana bilaogy ianao fa azo antoka fa mila fotoana! 😉
May 4, 2007 amin'ny 7: 37 AM
Fampiasam-bola anefa ny fitorahana bilaogy, Becky. Tambajotra sy hianarako bebe kokoa ny vakiako sy ny soratako. Ary koa, miaraka amin'ny fidiram-bolan'ny doka kely dia mahazo vola amin'ny bilaogy aho. Tsy azoko antoka raha mbola mahavita antsasak'adiny aho… saingy heveriko fa mendrika izany amin'ny farany.
Misaotra amin'ny fidirana! Tsy isalasalana fa ny famakiana sy ny fivezivezena tsy misy farany dia mety hahatonga ny olona iray tsy hamokatra!
May 3, 2007 ao amin'ny 4: 04 PM
Lahatsoratra tsara - tiavo. Tsara lavitra noho ireo lisitra tsy misy farany an'ireo toro-hevitra momba ny famokarana 20-30 izay tsy tadidinao akory, aza ampiharina mihitsy.
May 4, 2007 amin'ny 7: 35 AM
Miombon-kevitra aminao aho John! Mety tsy namokatra izany raha nisy namaky mihoatra ny 5!
May 3, 2007 ao amin'ny 11: 51 PM
Ny fampandrenesana Google sy ny fitetezana surf no mampiditra ahy! Misaotra anao nanome ahy alalana handeha any amin'ny Zone.
May 4, 2007 amin'ny 7: 40 AM
Google Alerts dia mandeha amiko ihany koa. In-droa isan'andro aho no mijery azy ireo!